Waa Kuwee 15-ka Ciyaartoy Ee Kubbada Cagta Yurub Ugu fiicnaa Tan Iyo Muddadii Xili Ciyaareedka Dib Loo Bilaabay? - Gool24.Net
Waa Kuwee 15-ka Ciyaartoy Ee Kubbada Cagta Yurub Ugu fiicnaa Tan Iyo Muddadii Xili Ciyaareedka Dib Loo Bilaabay?
Kadib saddex bilood oo lagu jiray go’doon iyo kubbada cagta oo gabi ahaanba la xayiray waxaa dib loogu soo labatay garoomada kubbada cagta waxaana dib u furmay horyaalada Yurub ugu waa wayn marka laga reebo horyaalka France oo xili horeba la soo gaba gabeeyay.
Muddo laba bilood ku dhaw waxaa socday dib u curashadii xili ciyaareedka waxaana tan iyo dib u bilaabashada jiray ciyaartoy qaab ciyaareedka ugu fiican soo bandhigay.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa dhamaan 15ka ciyaartoy ee ugu fiicnaa tan iyo markii xili ciyaareedkan 2019/2020 dib loo bilaabay halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
15. Marcos Llorente, Atletico Madrid:
12. Paulo Dybala, Juventus: Kulan kasta oo uu soo ciyaaray ee horyaalka Serie A intii dib loogu soo laabtay ayuu goolal soo dhaliyay waxayna goolashiisu Juventus ka caawiyeen in ay halka ugu saraysa kaga jiraan Serie A.
11. Paul Pogba, Manchester United : Pual Pogba ayaa tan iyo markii uu xili ciyaareedku dib u bilawday waxa uu saamayn wayn ku yeeshay kooxdiisa United oo uu ka caawinayo in ay Champions league u soo bixi karaan.
10. Cristiano Ronaldo, Juventus : Waxa uu afar gool ku soo dhaliyay afartii kulan ee uu soo ciyaaray Serie A waxaana ku jira goolkii cajiibka ahaa ee uu ka dhaliyay Genao iyo laagii xorta ahaa ee Torino.
9. Thomas Muller, Bayern Munich: Waxa uu soo sameeyay 5 gool caawin si uu gool caawintiisa xili ciyaareedkan ee Bundesliga u gaadhsiiyo 21 gool caawin waana heerkiisii ugu fiicnaa sanadihii ugu danbeeyay.
8. Kai Havertz, Bayer Leverkusen: Waa da’yarka ay kooxaha Yurub isku haystaan wuxuuna 21 sano jirkan kooxdiisa Bayer Leverkusen ku muujiyay awooda iyo tayada ciyaareed ee uu leeyahay ee sababta u ah in kooxaha Yurub ugu waa wayni doonayaan.
7. Bruno Fernandes, Manchester United: Waxa uu badalay xaaladii murugada lahayd ee Man United wuxuuna noqday mid United si dhab ah uga caawinaya in ay Champions League ku soo laaban karaan. Afar gool oo uu soo dhaliyay iyo laba gool caawin oo uu sameeyay ayaa Fernandes ka dhigtay xidigaha ugu fiican intii la soo laabtay.
6. David Alaba, Bayern Munich: Waxa uu sanado badan soo ahaa difaaca bidix ee ugu fiican laakiin waxa uu isku badalay difaac dhexe oo saamayn badan isaga oo intii la soo laabtay bandhig wayn sameeyay.
5. Sergio Ramos, Real Madrid: Waxa uu door muuqda oo wayn ku leeyahay in kooxdiisa Real Madrid ay 4 dhibcood ku hayso hogaanka La Liga waxa uu soo dhaliyay 5 gool intii xili ciyaareedka lagu soo laabtay halka Real Madrid laba gool oo kaliya laga soo dhaliyay.
4. Karim Benzema, Real Madrid: Hadda waa xidiga bandhiga Real Madrid waana hogaamiyaha dhabta ah ee weerarka Los Blancos iyada oo xidiga reer France soo sameeyay saamayn wayn oo kooxdiisa ka caawisay in ay halka ugu saraysa ku jiraan waxaana ka mid ah goolashii Real Sociedad iyo Valencia.
3. Kevin De Bruyne, Manchester City: Waa xidig ugu fiican Premier League waqti xaadirkan wuxuuna ku dhaw yahay in uu ciyaartoyda koobka Premier league ku soo guulaystay ee Liverpool uu ku garaaci karo abaal marinta xidiga sanadka ee Premier League.
2. Lionel Messi, Barcelona: Lionel Messi ayaa tan iyo markii lagu soo laabtay xili ciyaareedka waxa uu soo dhaliyay afar gool wuxuuna soo caawiyey 7 gool taas oo la micno ah in 11 gool uu ku soo lug yeeshay dhawrkii kulan ee ilaa hadda la soo ciyaaray.
1. Robert Lewandowski, Bayern Munich: Waxaa xidiga ilaa hadda ugu fiican intii xili ciyaareedka lagu soo laabtay ah gool dhaliyaha kooxda Bayern Munich ee Lewandowski.
Lewandowski ayaa 12 gool soo dhaliyay tan iyo markii go’doonkii fayraska karoonaha laga soo laabtay wuxuuna soo ciyaaray 10 kulan taas oo la micno ah in celcelis ahaan uu kulankiiba dhalinayay wax gool ka badan taas oo ka dhigtay xidiga safka hore ka soo galay tartanka Ballon d’Or.
c.pulisic lacib Aan marna lajoojinkarin sida uu ubilowday xilli ciyaareedka kulan katana awoodisa mujinaya waa lacib sida loo so labtay qaabkale lasoo baxay